Ukusho ukuthi yiwayini ethandwa emhlabeni eminyakeni yamuva, kumele ibe nendawo yobhiya kwezobuciko. Ngaphandle kokusho incazelo yobhiya wezikebhe, ukuthi ungayikhetha kanjani imishini yobhiya yezandla nayo ayaziwa ngabantu abaningi! Eqinisweni, ayikho imodeli ethile yemishini yobhiya. Kuyithuluzi elenziwa ngasese. Ngokuvamile, idinga ukuhlanganiswa futhi ifaniswe ngokwezidingo zayo, kepha maqondana nokuthi uyihlanganisa kanjani, kunezici ezithile.
Namuhla ngizokunikeza isayensi ethandwayo- "Izinto eziphathelene nezinto zokwenziwa kobhiya" Okokuqala, uma ufuna ukukhiqiza ubhiya oyiqiniso futhi omnandi wezandla, kufanele uqonde inqubo yokukhiqiza ubhiya. Ukugeleza kwesibalo esingezansi kuyinqubo yonke yokubeka izinto ezingavuthiwe emishini ukwenza ubhiya ocebile wezikebhe.
Ngemuva kokufunda inqubo yokwenza, ingabe uthole ukuthi imishini idlala indima ebaluleke kakhulu enqubweni yokwenziwa kwephepha? Iqoqo eliphelele lemishini yobhiya lifaka phakathi izakhi eziphambili ezifana nohlelo lokuchoboza, uhlelo lwe-saccharization, uhlelo lwe-Fermentation, uhlelo lokuqandeka, uhlelo lokuhlanza, uhlelo lokulawula, uhlelo lwe-canning kanye nezinto eziningi ezisizayo. Ake ngikwazise kumadivayisi ahlanganisiwe ambalwa
Intelligent split 2 imishini yokuhlanganisa imishini
Ububanzi besicelo: indawo encane yokusebenzela ubhiya, ihhotela, ibha, indawo yokudlela
Izinto zokwakha: Izinto ezijwayelekile zensimbi engagqwali zomhlaba wonke ezingama-304
Izakhi: Ithangi lokuhlaziya le-Intelligent, tank lokuhlunga kanye ne-sedimentation elihlanganisiwe, ithangi lokuhlinza elikhaliphile
Izinzuzo zamathuluzi: ukubukeka okuhle, ukubuka okuncane,
Uma kuqhathaniswa neminye imishini, kungonga amandla amakhulu, Izinga eliphakeme le-othomathikhi, okulula ukufundwa nokuqondisisa, Imishini isebenzisa imodi yokushisa kagesi, akukho msindo futhi akukho ukungcoliswa, ukonga amandla nokuvikela imvelo, futhi kunciphisa izindleko.
Hlukanisa imishini emithathu yokuhlanganisa amadivaysi
Ububanzi besicelo: ifektri encane yobhiya
Izinhlanganisela: ithercharization / isihlungi sethangi + itanki elibilayo + itanki lokuzila, i-Saccharification tank + itanki lokuhlunga + ithangi elibilayo / elinyayo
I-Saccharation / ibhodwe elibilayo + lethangi lokuhlunga + isinki se-spin
Izinzuzo zezinsizakusebenza: Izinhlanganisela ezahlukahlukene zingakhethwa, futhi kamuva zingashintshwa zibe yindawo enezitho ezine, ukukhiqizwa kukabhiya omkhulu kanye nokusebenza okuphezulu kokukhiqiza, Izinga eliphakeme lezinto ezenzakalelayo, kulula ukufunda nokufunda, Izindleko eziphelele zokwenza umsebenzi ziphansi futhi izinga lokusebenzisa imishini liphezulu.
Inhlanganisela yamadivayisi amane
Ububanzi besicelo: ejwayelekile ezindaweni ezifuywayo ezisezingeni eliphakathi nendawo
Izinhlanganisela: imbiza ye-saccharization, ithangi lokuhlunga, ibhodwe elibilayo, ithangi lokuyela phansi
Izinzuzo zamathuluzi: umthamo omkhulu wokukhiqiza ubhiya, ukusebenza ngempumelelo okukhulu kakhulu,
Izinga eliphakeme le-othomathikhi, okulula ukufundelwa nokufundwa kahle, Izindleko eziphelele zokwenza umsebenzi ziphansi, futhi ukwahlukaniswa kwemishini kucacile.
Okuvame ukutholakala ezindlini ezifuywayo ezisezingeni eliphakathi nendawo nezinkulu, kufakwa ithangi lesikhashana lesikhashana ngokuhlanganiswa kwamadivaysi amane okugcina okwesikhashana i-wort ehlungiwe, enganciphisa isikhathi sokulinda ebhodweni elibilayo futhi ithuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza lonke uhlelo. Umthamo we-saccharation ukhushulwa izikhathi ezingama-6-8 ngosuku.
Injini yokugqekeza enobuhlakani ebukhali
Ithangi lokuvutshelwa ukuhlinzeka ngemvelo efanelekile yokuthi imaltose iguqulwe ibe ngama-alcohols ngemuva kokuba i-wort selehlile futhi yafakwa imvubelo. Ithangi lokuvuthwa lifakwe ekhanda likavemvane eliphakeme, ipulangwe eyakhiwe eyakhiwe ngo-miller / i-CIP ifafaza ibhola / isampula i-valve / imitha yolwesi / indawo yokuphuma kanye nomgudu wokukhuculwa kwendle, umfutho wamatshe ovale uphawu lwamatsheyinti we-valve / portanium nezinye izinkomba ezisekelayo . Ngokufakwa kwe-polyurethane ukuqinisekisa ukuthi amazinga okushisa avuthayo agcinwa aphansi. Ifakwe inzwa yokushisa ye-PT100, enohlelo lwe-PLC auto-control.
Ngemuva kokufunda isayensi le ethandwayo, ukuthi ungayikhetha kanjani imishini yobhiya kufanele iqondwe enhliziyweni yakho. Uma ungakaqondi noma ufuna ukubonisana neminye imibuzo ngemishini yobhiya, ungangithinta. Ngizokunikeza izimpendulo zochwepheshe. .
Isikhathi sokuthumela: Apr-16-2020